राधी विद्युत र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्यमा गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? - नेपालबहस
राधी विद्युत र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्यमा गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ?
| १०:०७:०८ मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडौं । लामो समय निरन्तर बढिरहेको राधी विद्युत र विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्यमा बुधबार गिरावट आएको छ । हालै लाभांश घोषणा गरेको राधी विद्युत र विशाल बजार कम्पनी शेयरमूल्य उच्च दरले घटेको छ ।
बुधबार राधी विद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य ७ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य ९४ रुपैयाँले घटेर १२ सय ६ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य ६ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ रहेको छ ।बुधबार कम्पनीको शेयरमूल्य १ सय १४ रुपैयाँले घटेको हो । नेप्सेले कम्पनीको वित्तीय विवरण पेश नगरेको भन्दै लामो समयदेखि कारोबार रोक्का गरेको थियो ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण हुन बाँकी वित्तीय विवरण र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्मको विवरणहरु र अन्य अपरिकृत त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक विवरणहरु नेप्सेको कम्पनी लगइनबाट नेप्सेको वेबसाइटमा अपलोड गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जसपश्चात कम्पनीको कारोबार फुकुवा भएको हो । उक्त समयमा कम्पनीको शेयरमूल्य १५ सय रुपैयाँ थियो । कारोबार फुकुवा पश्चात छोटो समयमा कम्पनीको शेयरमूल्य करिब ७ हजार हाराहारीमा पुगेको छ ।
महिला लघुवित्तसहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? ९ घण्टा पहिले
अपर तामाकोशी हाइड्रो कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि, कुन कतिले बढ्यो ? १४ घण्टा पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ८ लाख २१ हजार कित्ता खरीद माग १५ घण्टा पहिले
चन्द्रागिरि हिल्ससहित ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? १ दिन पहिले
सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ४ प्रहरी नियन्त्रणमा १३ घण्टा पहिले
वर्षाका कारण हुम्लामा ५ दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध ७ दिन पहिले
ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ: विपक्षी गठबन्धन २ दिन पहिले
ओली पर्ख र हेरको अवस्थामा २ दिन पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु १ हप्ता पहिले
भिरबाट लडेर वडासदस्यको मृत्यु २ दिन पहिले
डेनमार्कले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने ३ हप्ता पहिले
पूर्व माओवादी नेताहरुको पीडा: भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन् ! ३ दिन पहिले
ग्लोबल आईएमई बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ब्याजदर, कुन खातामा कति ब्याज ? १ हप्ता पहिले
अन्नपूर्ण कोभिड हेल्पलाइनलाई नेलम्बोद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री २ हप्ता पहिले
घरबाटै साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनी मार्फत खाद्य वस्तु मगाउन सकिने ४ हप्ता पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट ७३ लाख संक्रमित, ४ लाख १३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु १२ महिना पहिले
जथाभावी विषादी र करेन्ट लगाउँदा माछा पाइन छाडे २ महिना पहिले
यसरी धरासायी बन्दैछ, बैंक अफ काठमाण्डू ? अधिकांश सुचक ऋणात्मक १ वर्ष पहिले
मोरङमा खुकुरी प्रहारबाट एकको मृत्यु, चार घाइते १० महिना पहिले